Umgaqo-nkqubo wabucala – Cofa apha ukuqala ukunciphisa i-URL. .
Cofa apha ukuqala ukunciphisa i-URL. .
Ukunciphisa i-URL nge-analytics, ukujoliswa kwe-geo, ukulandelela ikhonkco, i-API, ukunqunyulwa kwekhonkco ubuninzi kwifayile, kunye nokuthintela ubuqhetseba kwiinkqubo zokudibana
https://shortest.link Umgaqo-nkqubo wabucala
Umgaqo-nkqubo wabucala uhlanganiselwe ukusebenzela ngcono abo bachaphazelekayo ngendlela yabo ‘Ulwazi oluchongiweyo lomntu’ olusetyenziswa kwi-Intanethi. I-PII, njengoko ichaziwe kumthetho wabucala wase-US kunye nokukhuseleka kolwazi, lulwazi olunokusetyenziswa lodwa okanye nolunye ulwazi ukuchonga, ukunxibelelana, okanye ukufumana umntu omnye, okanye ukuchonga umntu ngokomxholo. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ngononophelo ukuze ufumane ukuqonda okucacileyo kwendlela esiqokelela, sisebenzise, sikhusele, okanye ngenye indlela sisingatha ngayo uLwazi oluKhethekileyo oluNgqinelana newebhusayithi yethu.
Loluphi ulwazi lomntu esiqokelela ebantwini abatyelele ibhlog yethu, iwebhusayithi, okanye usetyenziso?
Xa u-odola okanye ubhalisa kwindawo yethu, ngokufanelekileyo, unokucelwa ukuba ufake i-Url yakho ende, i-Url emfutshane, okanye ezinye iinkcukacha ukukunceda ngamava akho.
Siqokelela ulwazi kuwe xa ugcwalisa ifom okanye ufaka ulwazi kwindawo yethu.
Silusebenzisa njani ulwazi lwakho?
Sinokusebenzisa olu lwazi siluqokelela kuwe xa ubhalisa, uthenga, ubhalisela iincwadana zethu, uphendula kuvavanyo okanye kunxibelelwano lwentengiso, ucofa iwebhusayithi, okanye usebenzise ezinye izinto zesiza ngezi ndlela zilandelayo:
Ukuphucula iwebhusayithi yethu ukuze sikuncede ngcono.
Silukhusela njani ulwazi lwakho?
Sinikezela kuphela ngamanqaku kunye nolwazi. Asizange sicele iinombolo zekhadi letyala.
Sisebenzisa i-Malware Scanning rhoqo.
Ulwazi lwakho lomntu siqu luqulethwe kumanethiwekhi akhuselekileyo kwaye lufikeleleke kuphela kwinani eliqingqiweyo labantu abanamalungelo okufikelela okukhethekileyo kwezi nkqubo, kwaye kufuneka ukuba bagcine ulwazi luyimfihlo. Ukongeza, lonke ulwazi olubuthathaka / olunikezela ngetyala lubhalwe ngokufihliweyo ngeTekhnoloji yeSocket Layer (SSL) ekhuselekileyo.
Sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokhuselo xa umsebenzisi engena, engenisa, okanye efikelela kulwazi lwabo ukugcina ukhuseleko lweenkcukacha zakho.
Yonke intengiselwano iqhutywa ngumboneleli wesango kwaye ayigcinwanga okanye ayenziwa kwiiseva zethu.
Ngaba sisebenzisa ‘iicookies’?
• Qokelela idatha edityanisiweyo malunga nokugcwala kwesiza kunye nokunxibelelana kwesiza ukulungiselela ukubonelela ngamava angcono esiza kunye nezixhobo kwixesha elizayo. Sinokusebenzisa iinkonzo zomntu wesithathu ezithembekileyo ezilandelela olu lwazi endaweni yethu.
Ukuba ucima iicookies, ezinye zeempawu ezenza ukuba amava akho kwindawo isebenze ngakumbi zisenokungasebenzi ngokufanelekileyo. Ayizukuchaphazela amava omsebenzisi enza ukuba indawo yakho ibe nakho ukusebenza ngakumbi kwaye inokungasebenzi kakuhle.
Ukubhengezwa kweqela lesithathu
Nangona kunjalo, ulwazi lwendwendwe olungaqondakaliyo lunokunikwa amanye amaqela kwintengiso, intengiso, okanye ezinye izinto ezisetyenziswayo.
Amakhonkco eqela lesithathu
Ngamaxesha athile, ngokokubona kwethu, sinokubandakanya okanye sinikeze iimveliso zomntu wesithathu okanye iinkonzo kwiwebhusayithi yethu. Ezi sayithi zomntu wesithathu zinemigaqo-nkqubo yabucala eyahlukileyo nezizimeleyo. Thina, ke ngoko, asinalo uxanduva okanye uxanduva lomxholo kunye nemisebenzi yezi ndawo zidibeneyo. Nangona kunjalo, sifuna ukukhusela ukuthembeka kwendawo yethu kwaye samkele nayiphi na ingxelo malunga nezi ndawo.
Sisebenzisa intengiso yeGoogle AdSense kwiwebhusayithi yethu.
UGoogle, njengomthengisi weqela lesithathu, usebenzisa ikuki ukuhambisa iintengiso kwindawo yethu. Ukusetyenziswa kukaGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba ikwazi ukuhambisa iintengiso kubasebenzisi bethu ngokusekwe kutyelelo lwangaphambili kwindawo yethu nakwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi. Abasebenzisi banokukhetha ukuphuma kwicookie ye-DART ngokundwendwela umgaqo-nkqubo wabucala weNtengiso yeGoogle kunye noMxholo weNethiwekhi.
Ukumaketha kwakhona ngeGoogle AdSense
• Ingxelo kaGoogle yokuBoniswa kweNethiwekhi
Idemografi kunye neNgxelo yeNzala
• Umdibaniso wePlatifomu yokuCofa kabini
Thina, kunye nabathengisi benkampani yesithathu ezinje ngeGoogle sisebenzisa ii-cookies zomntu wokuqala (ezinje ngeicookies zikaGoogle) kunye nee-cookies zomntu wesithathu (ezinje ngeKuki ye-DoubleClick) okanye ezinye izinto zokuchonga umntu wesithathu kunye ukudibanisa idatha ngokubhekisele ekusebenzisaneni komsebenzisi Iimpawu zentengiso kunye neminye imisebenzi yeenkonzo zentengiso njengoko zinxulumene newebhusayithi yethu.
Abasebenzisi banokuseta ukhetho ngendlela iGoogle eyithengisa ngayo usebenzisa iphepha lezicwangciso zeGoogle. Ngenye indlela, unokukhetha ukuphuma ngokundwendwela iphepha lokuPhuma kwiNethiwekhi okanye ngokusebenzisa iGoogle Analytics Opt Out Browser on on.
UGoogle reCAPTCHA V2.
Yeyiphi idatha eqokelelwa yireCAPTCHA?
Okokuqala i-reCAPTCHA algorithm iya kujonga ukuba kukho ikuki kaGoogle kwikhompyuter esetyenziswayo.
Emva koko, enye ikhukhi eyongezelelweyo ye-reCAPTCHA iya kongezwa kwisikhangeli somsebenzisi kwaye iya kuthathwa-ipikseli ngepikseli-umfanekiso opheleleyo wewindows yesikhangeli somsebenzisi ngelo xesha.
Olunye isikhangeli kunye nolwazi lomsebenzisi oluqokelelweyo ngoku lubandakanya:
Zonke iicookies ezisethwe nguGoogle kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo,
Zingaphi ii-mouse onqakraza kuzo kwisikrini (okanye uchukumise ukuba sisixhobo sokubamba),
Ulwazi lweCSS lwelo phepha,
Ulwimi olusetwe ngalo isikhangeli,
Nayiphi na iplagi efakwe kwisikhangeli,
UMthetho woKhuseleko lwaBucala waseCalifornia
ICalOPPA ngumthetho wokuqala kurhulumente kwisizwe ukufuna iwebhusayithi zorhwebo kunye neenkonzo ze-Intanethi ukuthumela umgaqo-nkqubo wabucala. Ukufikelela komthetho kolule ngaphaya kweCalifornia kufuna ukuba nawuphina umntu okanye inkampani e-United States (kwaye mhlawumbi kube lihlabathi) elisebenza kwiiwebhusayithi eziqokelela ulwazi oluchongiweyo oluvela kubathengi baseCalifornia ukuthumela umgaqo-nkqubo wabucala ocacileyo kwiwebhusayithi yayo echaza ngqo ulwazi oluqokelelweyo kunye nezo abantu okanye iinkampani ekwabelwana ngazo. -Bona ngakumbi kwi-http: //consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
NgokweCalOPPA, siyavuma oku kulandelayo:
Abasebenzisi banokundwendwela indawo yethu ngokungaziwayo.
Nje ukuba lo mgaqo-nkqubo wabucala wenziwe, siyakongeza ikhonkco kwiphepha lethu lasekhaya okanye ubuncinci, kwiphepha lokuqala elibalulekileyo emva kokungena kwiwebhusayithi yethu.
Ikhonkco lethu loMgaqo-nkqubo wabucala libandakanya igama elithi ‘Ubumfihlo’ kwaye linokufumaneka ngokulula kwiphepha elichazwe apha ngasentla.
Uya kwaziswa ngalo naluphi na utshintsho loMgaqo-nkqubo Wabucala:
Kwiphepha lethu loMgaqo-nkqubo wabucala
Ungalutshintsha ulwazi lwakho lomntu siqu:
• Ngokusithumela i-imeyile
Ngaba indawo yethu yokubamba ayizilandeli imiqondiso?
Siyakuhlonipha Musa ukuKhangela imiqondiso kwaye Musa ukuKhangela, tyala ii-cookies, okanye usebenzise intengiso xa ungakhangeli (DNT) indlela yesikhangeli esikhona.
Ngaba indawo yethu iyakuvumela ukulandelwa kokuziphatha komntu wesithathu?
I-COPPA (uMthetho woKhuseleko lwaBucala waBantwana kwi-Intanethi)
Xa kufikwa kwingqokelela yolwazi lobuqu oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala, uMthetho waBantwana woKhuseleko lwaBucala kwi-Intanethi (COPPA) ubeka abazali kulawulo. I-Federal Trade Commission, i-arhente yokhuseleko lwabathengi e-United States, inyanzelisa umthetho weCOPPA, ochaza into ekufuneka yenziwe ngabasebenzisi bewebhusayithi kunye neenkonzo ze-Intanethi ukukhusela ubumfihlo babantwana kunye nokhuseleko kwi-Intanethi.
Asithengisi ngokuthe ngqo kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala.
Ngaba siyavumela abantu besithathu, kubandakanya iinethiwekhi zentengiso okanye ii-plug-ins, ukuqokelela i-PII kubantwana abangaphantsi kwe-13?
Iinkcukacha zoLwazi oluLungileyo
Imigaqo yokuSebenza yoLwazi oluLungileyo yenza isiseko somthetho wabucala eUnited States kwaye iikhonsepthi ezibandakanya zona zidlale indima ebalulekileyo kuphuhliso lwemithetho yokukhusela idatha kwihlabathi liphela. Ukuqonda iMigaqo yokuSebenza yoLwazi oluLungileyo kunye nendlela ekufuneka iphunyezwe ngayo kubalulekile ukuthobela imithetho eyahlukeneyo yemfihlo ekhusela ulwazi lomntu.
Ukuze sihambelane neZenzo zoLwazi oluLungileyo siza kuthatha amanyathelo alandelayo okuphendula, ukuba kunokwenzeka ukwaphulwa kwedatha:
Siza kwazisa abasebenzisi ngesaziso sendawo ekuyo
• Zingekapheli iintsuku ezisixhenxe zomsebenzi
Siyavumelana noMgaqo woLungiso loMntu ngamnye ofuna ukuba abantu banelungelo lokulandela ngokusemthethweni amalungelo anyanzelekileyo ngokuchasene nabaqokeleli zinkcukacha kunye neeprosesa ezingaphumeleliyo ukuthobela umthetho. Lo mthetho-siseko awufuni kuphela ukuba abantu banamalungelo anyanzeliswayo ngokuchasene nabasebenzisi beenkcukacha, kodwa kwanokuba abantu babhenele kwiinkundla okanye iiarhente zikarhulumente ukuba ziphande kwaye / okanye zitshutshise ukungathotyelwa kwabavavanyi beenkcukacha.
Umthetho we-CAN-SPAM ngumthetho obeka imigaqo ye-imeyile yorhwebo, umisela iimfuno zemiyalezo yorhwebo, unika abafumanayo ilungelo lokuba ii-imeyile zinqunyanyiswe ukuba zithunyelwe kubo, kwaye ichaze izohlwayo ezinzima zokuphula umthetho.
Siqokelela i-imeyile yakho ukuze:
Musa ukusebenzisa izifundo ezingezizo okanye ezilahlekisayo okanye iidilesi ze-imeyile.
• Chonga umyalezo njengesibhengezo sentengiso ngendlela efanelekileyo.
• Faka idilesi yendawo yokuhlala yeshishini lethu okanye ikomkhulu lesiza.
• Ukubeka iliso kwiinkonzo zokuthengisa nge-imeyile zomntu wesithathu ukuba ziyathotyelwa, ukuba kusetyenziswa enye.
• Hlonipha ukukhetha ukuphuma / ukungabhalisi ngokukhawuleza.
• Vumela abasebenzisi ukuba bazirhumele ngokusebenzisa ikhonkco elisezantsi kwemeyile nganye.
Ukuba nangaliphi na ixesha ungathanda ukungabhalisi ekufumaneni ii-imeyile ezizayo, ungasithumela i-imeyile
abuse@shortest.link kwaye siya kukususa ngokukhawuleza kuyo YONKE imbalelwano.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nalo mgaqo-nkqubo wabucala, ungaqhagamshelana nathi usebenzisa ulwazi olungezantsi.
Igqityelwe ukuhlelwa ngo-2021-01-11
Isalathiso sezifinyezi ze-URL
Imveliso emfutshane yekhonkco yeemfuno ezimangalisayo
Khetha izinto eziyimfuneko
Ukunciphisa i-URL ngobuninzi
I-URL emfutshane yesiqhelo
Ukuthintela urhwaphilizo kwiinkqubo zokudibana
Features: Ukulandela umkhondo
Mfutshane nge-URL ngaphandle kwentengiso
Cofa apha ukuqala ukunciphisa i-URL. . Proudly powered by WordPress